Riix, cidhiidhin, booc-boocsi Sida loo horumariyo dhaqanka bulshada ee carruurta
Carruurtu ma yaryihiin kuwa yaryar?
Dabeecadaha bulshada ee carruurta waxay ku guuleystaan ​​inay la xiriiraan dadka kale
Dabeecad wanaagsan - weli mawduuc muhiim ah ee waxbarashada?
Xoojinta carruurta dhaqanka bulshada iyo xirfadaha bulshada - maxaa muhiim u ah?
Xirfadaha bulshada waa xirfad ay carruurtu marka hore bartaan. Ma jiro qof bini'aadam ah oo ku dhasha bulsho ahaan, sidaas darteed xiriirinta iyo dalbashada dabeecad wanaagsan oo bulsheed ayaa ah qayb muhiim ah oo ka mid ah habaynta bulshada iyo waxbarashada. Dabeecadaha bulshada ee carruurta ayaa saameyn ku yeelanaya waalidka iyo deegaanka bulsheed ee carruurta.
Riix, cidhiidhi, booc-boocsi? Sida loo dhiirigeliyo dabeecadaha bulshada ee carruurta
Jaaliyaddeena waxaa loo baahan yahay wada shaqeyn bulsho iyo wax dhisis ah. Qof kastaa waxa laga filayaa inuu u hoggaansamo oo keliya sharciyada, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay caadooyinka iyo qiimaha.
Dhaqanka bulshada ee carruurta iyo xirfadaha bulshada waa in la barto
Haddii aadan sameyn, waxaad dhibaato kala kulantaa dadka kale isla markaana aad si dhakhso ah u noqotid qof kale.
Sidaa daraadeed, waa in ay ahaato hadaf waxbarasho oo muhiim ah adiga oo ah waalid ahaan inaad barato ilmahaaga sharciyada aasaasiga ah ee isdhexgalka bulshada. Later, waxaa lagugu caawin doonaa shaqadan sida hay'adaha xanaanada caruurta iyo dugsiyada.
Marka ugu horeysa, dhallaanka iyo socod-baradka waxa kaliya oo lagu hagaajiyaa naftooda. Waxay ka falceliyaan dariiqa wadada oo aan dib u dhisi karin baahidooda. Xaaladdan dhexdeeda, barayaasha iyo cilmi-nafsiga waxay ka hadlaan carqaladda carruurta ee qaaska ah.
Ilmaha yaryar, adduunku wuxuu isu wareegayaa laftiisa, laakiin tani maaha wax aan la sameyn kareynin: ilmo yar oo aan wali baranin si uu u aqoonsado baahida dadka kale uuna u dhaqmo si waafaqsan. Intaa waxaa dheer, inuusan wali ka tarjumi karin ficiladiisa iyo cawaaqibta ay leedahay. Tusaale ahaan, ilmo laba jir ah ayaa badanaa ogsoon in isagu ama iyadu yihiin dembi kale. Weli lama fahmi karo in uu xanuunka u keeno saaxiibkiisa ciyaaraha. Weynaan dareen macquul ah kama jiraan da'daas.
Xaaladaha sii xumaanaya, xaqiiqda ah in luqada aan weli ku filnayn horumarinta dhexdhexaadinta bulshada ee ugu muhiimsan ee isdhexgalka. Waxbarashada, garashada horumarka, maskaxda iyo horumarka bulshada iyo sidoo kale waayo-aragnimada shakhsiyeed ee la-qabashada carruurta kale iyo dadka waaweynba waxay ka caawiyaan ilmahaaga inuu fidiyo xirfadihiisa bulshada.
Tijaabooyinka iyo kormeerka carruurta ayaa xaqiijiyay in dhaqanka bulshadu u baahan yahay in laga barto carruurnimada hore.
Dhaqanka bulshada ee carruurta waa in lagu dhiirigeliyaa
Carruurta sii koraya ee ka go'doomin bulsheed waxay ku adagtahay in ay mag-dhabo siiyaan la'aanta waayo-aragnimada waxbarashada bulsheed iyo xiriirka ka dambeeya horumarkooda.
Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in ilmahaagu horay ula xiriiro carruurta kale. Tusaale ahaan, booqo koox cayaareed ama wax ka qabso qoysaska saaxiibtinimo si joogto ah. Saamaynta waxbarashada ee ilmahaagu waa mid aad u wanaagsan, sidoo kale waxaad fursad u leedahay inaad la shaqeysid waalidiinta kale.
Crèches iyo xannaanooyinku waxay sidoo kale sameeyaan waxqabad muhiim ah marka ay timaado kor u qaadida dhaqanka bulshada. Ilmahaagu wuxuu la kulmaa caruur badan oo kala duwan waxaana uu baranayaa inuu baahidiisa daboolo oo uu xalliyo khilaafaadka si waxtar leh. Sidaa daraadeed, u keen cunugaaga rugta daryeelka si joogto ah oo ka caawi barayaasha in ay xoojiyaan isdhexgalka bulshada si ay ugu adkeystaan ​​ku-tiirsanaanta guriga.
Cabbiraadda iyo dhaqanka wanaagsan wuxuu ka mid yahay himilooyinka waxbarashada ugu muhiimsan ee jiilalka hore. Laakiin kuwee ayaa muhiim ah maanta? Haa, dabeecad wanaagsan oo bulshadeed ee carruurta ayaa ka muhiimsan abid.
Xaqiiqdu waxay tahay xishmeyntu waxay sidoo kale muujineysaa ixtiraamka dadka kale. Intaa waxaa dheer, qof kastaa wuxuu rabaa in loola dhaqmo si naxariis leh. Sidaa daraadeed, anshaxa wanaagsani wali waa arrin maanta ah marka ay timaado xirfadaha bulshada iyo dhaqanka bulshada.
Haddii aad qiimeyso dhaqanka wanaagsan, waa inaad u sheegtaa ilmahaaga si bilaash ah. Marka laga eego dabeecadooda, caruurtu waxay marka hore u bartaan waalidiintooda. "Barashada qaabka" waa ereyga lagu isticmaalo jargon waxbarasho.
Ku dhiiri geli ilmahaaga inuu isticmaalo weedho macquul ah sida "fadlan" iyo "mahadsanid" isla markaasna naftaada u samee sida ugu badan ee suurtogalka ah. Later, waxaad ku sharaxi kartaa sababta ay muhiim u tahay in ay noqoto mid anshax iyo saaxiibtinimo leh. Sababta oo ah qofka aan adeecin xeerarka xeerarka ciyaarta. Saaxiibtinimada, dhinaca kale, ayaa furi kara daadadka - labadaba xirfad ahaan iyo gaar ahaanba.
Xagga sare, carruurta waxay u baahan yihiin inay bartaan sida loola dhaqmo iyaga dhexdooda iyo dadka waaweyn. Si arrintan loo sameeyo, waxay marka hore u leeyihiin inay dhexgalaan xeerar badan, sida caadada bulsheed ee ah in gardarrada jidheed aan la dooneynin. Carruurta yaryar ma fahmi doonaan macnaha iyo ujeeddada qaanuunkan illaa ay awood u leeyihiin in ay la qabsadaan "dhibbanaha" ayna ogaadaan in aysan iyagu doonaynin in la garaaco.
Sideen u dhaqmaa marka ilmahaygu jabo?
Sidaa darteed, haddii ilmahaagu isku dayayo inuu ku qasbo ciyaaraha, tusaale ahaan, sida hooyo ama aabe, waxaad u baahan tahay inaad si dhakhso ah wax uga qabato oo aad u xalliso xaaladda. U sheeg ilmahaaga inuu sugo ama uu heysto alaabo kale. Dabadeed, waa inaad ku dhiirigelisaa ilmahaaga inuu si sax ah u xalliyo khilaafaadka, u raadsado xal, ama raadsado caawimaad dadka waaweyn.
Haddii aad sameysid xeerar isdhexgalka bulshada, waa inaad sidoo kale hubisaa in ay u hoggaansamaan. Tani waa daal, laakiin waa lagama maarmaan si ilmahaagu u fahmo macnaha ayada oo dhab ahaantii ku dhafan. Haddii ay timaado xukunka xadgudubyada, tusaale ahaan, markaad la ciyaarayso carruurta kale, waa inaad si joogto ah u qaadataa. Qiyaasta kiiskan waxay noqon kartaa in ilmahaagu aanu ku martiqaadin saaxiibo mudo ah.
Waxaa muhiim ah in aad ku celcelisid ficil ku haboon dabeecad aanad rabin oo aad kor u qaaddo anshaxa, dhaqanka bulshada oo ammaan leh.
Bogga midabaynta Bogga Tigreega ee Pisa
Maxaan ugu kululeynay cuntada kulul? carruurta su'aal
Socdaalka Dalka Kanada - Ku safrida galbeedka Kanada
Janno leh carruur
Ku samee madaxa caloosha carruurta adigu
Geocaching carruurta | Hiwaayadaha firaaqada